Vavaka ho an'ny Virgen del Carmen. ? Ho an'ny tranga sarotra sy Fiarovana
Vavaka ho an'ny Virjiny avy any Carmen, tsy misy toe-javatra sarotra izay tsy voavaha amin'ny fehezanteny ary amin'ity tranga ity vavaka amin 'ny virijin'i Carmen Io no paikady fanoloran-tena izay matetika ilaintsika hiatrehana ny fiainana isan'andro, satria tsy fantantsika hoe rahoviana isika vao mila miaina zavatra sarotra ary tsara ho voasorohana.
Ny vavaka dia fitaovam-piadiana mahery vaika azontsika ampiasaina amin'ny fotoana rehetra ilantsika na mila izany.
Ny virijiny dia raisina ho mamoy fo ary izany dia satria fahagagana ary afaka manomboka hita maso ny valiny rehefa afaka mivavaka, izany no zava-misy.
Ny fahafantarantsika fa manana olona any an-danitra isika izay mahazo antsika ary afaka mandroso ho antsika amin'ny toe-javatra rehetra, mameno antsika amin'ny fiadanam-po sy fahatokisana fa ho tsara ny zava-drehetra.
1 Vavaka amin'ny Virgen del Carmen Iza moa ny Virgen del Carmen?
1.1 Vavaka amin'ny Virgen del Carmen amin'ny raharaha sarotra
1.2 Vavaky ny Virgen del Carmen ho an'ny fahazavana sy ny fiarovana
1.3 Vavaka fisaorana sy fanolorana
1.4 Vavak'i Virgen del Carmen mba hanatratrarana ny fitiavany
Vavaka amin'ny Virgen del Carmen Iza moa ny Virgen del Carmen?
Fantatra amin'ny Our Lady of Carmen, io dia iray amin'ireo toro-hevitra omena an'i Maria Virjiny. Ny anarany dia avy amin'ny Tendrombohitra Karmela any Israely izay ny heviny dia Garden.
Any amin'ny firenena sasany dia raisina ho olo-masina mpiaro ny ranomasina izy ary any amin'ny firenena hafa, toy ny any Espana dia heverina ho mpiaro ny Armada Espaniola izy. Voalaza fa tamin'ny taona 1251 dia niseho tamin'i Saint Simon Stock izay jeneraly ambonin'ny Orinasa io virjiny io.
Tao anatin'izany fihaonan-dehilahy izany dia nomena fahasamihafana sy fahazarany, ireo sary roa izay fantatra amin'ny anarana hoe môtô an'i Marian ny Carmelita manerana an'izao tontolo izao.
Ny fiankohofana ho an'i Maria Virjiny dia fanaon'ny fiangonana katolika izay manasongadina ny maha zava-dehibe ny virjiny amin'ny fahatongavan'i Jesosy Kristy Tompontsika ho toy ny endrika lehilahy eto ambonin'ity tany ity.
Fitaovan'Andriamanitra Ray manatanteraka ny fikasan'Andriamanitra mandraka androany.
Vavaka amin'ny Virgen del Carmen amin'ny raharaha sarotra
Manana sarotra an'arivony aho: ampio aho.
Vonjeo amin'ny fahavalon'ny fanahy: vonjeo aho.
Amin'ny hadisoako: hazavao aho.
Amin'ny fisalasalako sy ny alaheloko: lazao ahy.
Amin'ny aretiko: ampaherezo aho.
Rehefa manamavo ahy izy dia amporisiho aho.
Amin'ny fakam-panahy: arovy aho.
Amin'ny ora sarotra: ampaherezo aho.
Miaraka amin'ny fonao manana anao reny: tiavo aho.
Miaro ahy amin'ny herinao lehibe.
Ary eny an-tananao rehefa tapitra: raiso aho.
Virjin'i Carmen, mivavaha ho anay.
Amin'ny maha reny azy, i Maria Virjiny dia mahafantatra ny alahelo ho an'ny olon-tiana iray izay tandindonin-doza.
Mahafeno fepetra izy ary manana fahefana hanolo izay ilaintsika alohan'ny mpanao azy ny zava-drehetra.
Ny vavaka natao tamim-pinoana avy amin'ny fanahy dia mandaitra, tsy afaka manontany raha tsy mino isika fa azo omena antsika ilay fahagagana miandry antsika, na manao ahoana na manao ahoana sarotra manjo azy, dia tadidio fa rehefa mivavaka isika dia Izahay dia mangataka zavatra izay afaka hahatratra izany amin'ny fomba voajanahary.
Vavaky ny Virgen del Carmen ho an'ny fahazavana sy ny fiarovana
Ry Virjiny masina any Carmen! Renin'i Jesosy Kristy Tompontsika ary mpiaro izay rehetra mitafy lamba masina anao.
Androany dia mivavaka alohan'ny akanjonao tsara fanahy aho mba hanazava ahy mandrakariva Amin'ny alàlan'ny lalan'ny fiainana eto amin'ity fiainana ity hivoahako raha tsy eo am-pelatananao ianao.
Mamelà ny heloko rehetra ary tiako indrindra ianao izao ary manaja anao isan'andro aho. Aza ilaozanao aho amin'ny fotoana maharary.
Ny fangatahana jiro sy fiarovana ho antsika, ho an'ny olona ao amin'ny fianakaviana na ho an'ny sakaiza manokana dia tsy vaovao.
Raha ny tena izy dia heverina ho iray amin'ireo fangatahana matetika aorian'ny fahagagana fahasalamana.
Ara-dalàna raha mahatsiaro ho tsy matoky tena na marefo ao anatin'ny tontolo iray izay toa mitombo ny faharatsiana ary izany no antony mahatonga ny fangatahana vavaka hanoherana ny Virgen del Carmen na olo-masina hafa izay afaka manampy antsika.
Vavaka fisaorana sy fanolorana
Ry Virjiny Masina any Carmen!
Tsy afaka mamaly am-pahamendrehana fotsiny ireo tombony ary misaotra fa nomenay anay tamin'ny fanomezanao anay Zafinao masina.
Raiso am-pitiavana, tsotra, saingy misaotra indrindra, satria tsy misy azonay omena anao izay mendrika anao sy ny famindramponao.
Atolotray ny fonay, amin'ny fitiavany rehetra, sy amin'ny fiainanay rehetra, izay tianay hampiasaina amin'ny fitiavana sy fanompoana an'ny Zanakao Tomponay, ary amin'ny fanaparitahana ny fifikiranao mamy ...
Mikatsaka ny rahalahinay rehetra ao amin'ny finoana, izay ahatonga antsika ho velona sy manaja, manome voninahitra ary misaotra ny fanomezanao lehibe, mitafy ny Holy Scapular, ary afaka miaina sy maty amin'ny fitiavanao sy ny fanolorantenanao daholo isika rehetra.
Tianao ny valin'ny fisaorana sy ny fanolorany ilay Virjavin'i Camen?
Imbetsaka isika no manadino ny vavaka rehefa vantany vao nahazo izay nangatahintsika, nefa tsy tokony ho izany.
Ny Baiboly dia mitantara ny olona tsy naneho fisaorana sy olona hafa izay nanao izany.
Toy izany koa ny tolotra ataontsika, hadinontsika ny zava-drehetra rehefa manana izay tadiavintsika isika.
Ny vavaka amin'ny fankasitrahana dia fihetsika iray izay tsy hita matetika any an-danitra. Rehefa manao tolotra isika ary tsy tanterahiny, dia hita eny an-danitra koa izany.
Na firy taona na firy no hisaorana na hanome izay nampanantenanao, ny zava-dehibe dia ny fanaovana izany.
Vavak'i Virgen del Carmen mba hanatratrarana ny fitiavany
Ry Virjin'i Carmen, Masina Masina Maria!
Ianao no zavaboary tsara indrindra, tena manaja, tena madio, tsara tarehy indrindra sy masina indrindra.
Enga anie ny olona rehetra nahafantatra anao, ry Dada sy Neny, raha tia anao ny olona rehetra araka ny mendrika anao!
Saingy mahazo fampiononana aho satria be dia be ny olona be voninahitra any an-danitra sy eto an-tany miaina amin'ny fitiavana sy ny hatsaranao.
Ary faly kokoa aho satria tia anao irery Andriamanitra mihoatra noho ny olona rehetra sy ny anjely.
Ilay mpanjakavavy malalako indrindra, izaho, mpanota tsy mety, dia tia anao ihany, saingy tiako kely ianao raha oharina amin'izay mendrika anao; Tiako ho feno fitiavana lehibe kokoa ianao noho izany ary izany no tokony hahatongavanao amiko, satria ny fitiavana anao sy ny mitondra ny maha-masina anao dia mariky ny mialoha ny voninahitra, ary fahasoavana izay omen'Andriamanitra ihany ireo maniry hahita famonjena.
Ka ianao, rehefa manantona ny zava-drehetra avy amin'Andriamanitra, raiso amiko ity fahasoavana ity: enga anie hirehitra ny foko amin'ny fitiavanao, araka ny fitiavana nasehonao ahy; Tiako ianao raha tena zanaka marina, satria tia ahy be fitiavana be an'i Neny ianao, ka rehefa miaraka aminao aho noho ilay fitiavana eto an-tany dia tsy hanavaka aminao aho any aoriana any.
Io vavaka ho an'ny Virgen del Carmen hanatratrarana ny fitiavany io dia tena mahery.
Ny fahazoana fitiavana marina dia ny ahiahy izay misy hatrany amin'ny fiainantsika, indrindra rehefa misy fotoana iray efa tratrarina na rehefa mijanona ho mpitovo ianao rehefa avy niaina nandritra ny fotoana voafetra.
Mitovitovy amin'izany ny vavaka izay mahomby amin'ny toe-javatra toy izany, raha toa ny fahitana mpiara-miasa dia maneho ny fahasarotana na ny toe-javatra izay tena sarotra amin'ny fitiavana, na handresy olona iray, ireo vavaka ireo mba hahazoana na hanatratra ny fitiavany.
Tsarovy fa mahery ny fitaovam-piadiana ara-panahy ary tsy azontsika atao ny tsy miraharaha azy ireo na dia tsy haintsika aza ny fomba fiasa, dia paikady mahery vaika izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana itadiavantsika azy miaraka amin'ny finoana sy fahatokisana fa hovaliana am-pahefana ny vavaka.
Samy ho tsara daholo izy rehetra, mangataka fanampiana sy axulio ary tsy marina ny hanao zavatra mihoatra ny indray mandeha.
Araraotina ny herin'ny vavaka amin'ny Virjin'i Carmen hanovana ny fiainanao.